Screen ကို record လုပ်ကြမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Screen ကို record လုပ်ကြမယ်
24-03-2007, 04:41 AM
Easy Screen Recorder Version 1.2.0.19
Easy Screen Recorder isavideo recording software for capturing screen activities into AVI movies. It can record the entire screen,awindow,afixed region, or any part of the screen. Audio can also be recorded from any source, including microphone, line-in, or speakers. It will especially suit making demos, tutorials, and training videos.
Version 1.2.0.19 may include unspecified updates, enhancements, or bug fixes.
U can recod as u like football match and .e on your computer.
Last edited by tu tu; 28-09-2008 at 09:59 PM..
18-01-2008, 01:18 AM
ပို့စ် 331 ခုအတွက် 1,639 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Easy Screen Recorder Version 1.2.0.19
အကိုရေ.... ကျွန်တော်သုံးတာ သိပ်မ good ဘူးဗျ ။ ဒါမျိုး တစ်ခြား software ရှိသေးလားခင်ဗျာ ။ ကျေးဇူးပါ။
Last edited by PyaitSone; 25-09-2008 at 11:43 PM.. Reason: Quote ပြင်ရန်။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ phoelapyaee အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit phoelapyaee's homepage!
Find More Posts by phoelapyaee
18-01-2008, 02:00 AM
ပြန်စာ - AutoScreenRecorder 2.1 Pro+Key
အောက်မှာယူလိုက်ပါ။ သူ့ဝက်ဆိုက်က Trial Link ပါ။
More Infos: http://www.wisdom-soft.com/products/autoscreenrecorder.htm
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-01-2008, 03:58 AM
ကျေးဇူးပါ ကိုပိုင် ။ အဆင်ပြေသွားပါပြီး ခင်ဗျာ
Last edited by PyaitSone; 25-09-2008 at 11:22 PM.. Reason: Quote ပြင်ရန်။
31-07-2008, 02:28 PM
တည်နေရာ: NayPyiTaw in Myanmar
ပို့စ် 115 ခုအတွက် 605 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မိမိ Computer Screen တွင် လှုပ်ရှားခဲ့ မှုများအား ဗီဒီယိုဖိုင်အဖြစ် save ထားချင်တယ်ဆိုရင် အခုပေးထားတဲ့ ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဒီဖိုဒမ်မှာ တင်ပြီးသာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်
အသုံးလိုသူများ အသုံးတည်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တင်ပေးလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်
Camtasia Recorder လေးပါ size က 28MB ပါ
စကာဝှက် - WWW.Myanmarfamily.Org
Last edited by kozaw.dagon; 31-07-2008 at 02:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ kozaw.dagon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖယောင်း, မောင်ရိုး, သော်ဇင်နိုင်, maJunior, zo
Find More Posts by kozaw.dagon
31-07-2008, 03:05 PM
ပို့စ်4ခုအတွက်5ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Screen ကို record လုပ်ကြမယ်
Computer Screen တွင် လှုပ်ရှားခဲ့ မှုများအား ဗီဒီယိုဖိုင်အဖြစ် save ထားတာကိုပြန်ကြည့်ချင်ရင် ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ lamin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
31-07-2008, 04:42 PM
Originally Posted by lamin
- Camsial record ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းပြီးသွားရင်
- install လုပ်ပါ ၊ ပြီးရင်
- desktop ပေါ်က Camsial record icon လေးကိုဖွင့်ပါ၊
- ပြီးရင် File Menu > Record the screen ကို ကလစ်ပါ၊
- New Record wizard box နဲ့Camtasia Recorder box ကျလာရင် New Record wizard box ကို Cancel လုပ်ပါ ပြီးရင် Camtasia Recorder box ရဲ့ Capture Menu > Region ကို ကလစ်
- Capture Menu အောက်က အနီရောင် ဘောလုံးပုံလေးနဲ့ Record ကို ကလစ်ပါ၊ ဒါဆိုရင် မိမိ၏ mouse pointer လေးက မျှားပုံလေး မဟုတ်တော့ဘဲ လက်ပုံလေးဖြစ်သွားပါပြီး
- မိမိ၏ screen ကို စတင် record လုပ်ရန်အတွက် screen area ကို စတင်သတ်မှတ်ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ပုံလေးကို မိမိ screen ရဲ့ ဘယ်ဘက် အပေါ ဒေါင့်မှစ၍ ဖြိပီးဆွဲလာပါ၊ ညာဘက်အောက်ဒေါင့် အရောက်တွင် လက်လွတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် screen record စတင်လုပ်နေပါပြီ
မိမိ screen တွင် လုပ်ရှားနေသမျှ အားလုံးကို record လုပ်နေပါပြီး
-	ရပ်လိုပါက Teskbar ၏ ညာဘက်အောက်နားတွင် Camtasia icon အနီလေးကို ရှာပါ၊ တွေ့ ရင် right click > Stop ကို ကလစ်လိုက်ပါ
-	မိမိ screen တွင် လှုပ်ရှားသမျှအားလုံးကို Camtasia အနေဖြင့်စတင် play ပါပြီ
-	ပြီးလျှင် Camtasia file type ဖြင့် save ပါ၊
-	ထိုဖိုင်အား အခြား computer တွင် ကြည့်နိုင်ရန်အတွက်
-	Post save option box ကျလာလျှင် Produce my vedio inashareable format ကို ရွေး၍ ok ကို ကလစ်ပါ။
-	Wizard box ကျလာရင် Next ကို ကလစ်၊
-	မိမိစိတ်ကြိုက် Vedio format ကို ရွေး၍ Next ကို ကလစ်၊
-	Encoding option box ကျလာမည် Next ကို ကလစ်၊
-	Vedio Size ရွေးရန် box ကျလာမည် default ထား Next ကိုကလစ်၊
-	Vedio Option ရွေးရန် box ကျလာမည် default ထား Next ကိုကလစ်၊
-	Marker Option box ကျလာမည် default ထား Next ကိုကလစ်၊
-	မိမိ encode လုပ်ပြီးဖိုင်ကို သိမ်းရန် နေရာရွေး၍ Finish ကိုကလစ်၊
ဒါဆိုရင် မိမိ၏ Vedio ဖိုင်အား မည်သည့် computer တွင်မဆို ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
Last edited by kozaw.dagon; 31-07-2008 at 04:44 PM..
ကိုရင်ပြည့်စုံ, ဖယောင်း, အောင်စည်သူ, maJunior, zo
31-07-2008, 07:40 PM
ပို့စ်6ခုအတွက် 42 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးကို ဇော်ရေ။ဒါ လေးကို ကျွန်တော်ရှာနေတာကြာနေပြီ။အခုလို ရလုက်တာဝမ်းသာတယ်ဗျာ.ဒီထပ်ကောင်းတဲ့ software တွေကိုရှာနုငိပါစေ.......
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ kayinlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit kayinlay's homepage!
Find More Posts by kayinlay
ပြန်စာ - Screen Capture Software collections
Video Capture Master v7.0.1.890
Video Capture Master is so easy to use, follow the steps below to capture video or image from video devices:
1. Check whether the video device from which you want to capture files is correctly connected by clicking "Disconnect" or "Connect".
2. Click "Device Settings" button to set proper settings such as video input size and video frame rate for input video device.
3. Click "Settings" button to set proper settings for your output file. You can:
>> Select output format on Codec tab.
>> Set time and interval for your video capturing task in Shot Frame tab.
>> Add water mark such as images, words or icon on video files in the Overlay tab.
>> Adjust video effect in Video Effect tab.
4. Click "Capture Settings" button to set desired settings for your capturing task. You can
>> Select desired output path to save your captured files and adjust desired volume and balance parameters.
>> Check or uncheck the boxes to perform corresponding operations.
5. After you confirm all settings, click "Start" button to capture video from video device.
Click "Shot Frame" button to start capturing image from video device.
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နိုင်လင်းစိုး, ဖယောင်း, bonge, nyi nge, tu tu, zo
ပို့စ် 70 ခုအတွက် 241 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုပိုင်...AutoScreenRecorder 2.1 Pro ဆော့ဝဲလ်အတွက် serial key လေး ပြန်တင်ပေးလို့ ရပါသလား။ ပေးထားတဲ့လင့်က ဖိုင်မရှိတော့လို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
[COLOR="DarkRed"]လူတိုင်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ဖြေဆည်ရာလေး ဖြစ်ချင်တယ်[/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကိုရဲလင်းထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit ကိုရဲလင်းထွန်း's homepage!
Find More Posts by ကိုရဲလင်းထွန်း
11-03-2014, 08:09 AM
ပြန်စာ - Screen ကို record လုပ်ကြမယ်
အကိုရေ ဒီဟာလေးထည့်စမ်းကြည့်ပေးပါလား ကျနေ်ာတွေ.တာလေးပါ
တကယ်လို. အဆင်မပြေရင် ထပ်ရှာကြတာပေါ့။
as2p-u29j-dqch-907d-wjmf (အကုန်လုံး စာလုံးအကြီးနဲ. ရေးပေးဖို.ပါ)
Last edited by zo; 11-03-2014 at 08:12 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Devices ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း ကိုဖြိုးငြိမ်း Hardware များဆိုင်ရာ524-05-2016 08:38 AM
Crystal icon လေးများအတွက် Tutorial ပြည့်ဖြိုး ဆွေးနွေးချက်များ 1 31-05-2008 06:53 PM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 01:10 AM